In dunida meesha telefoonada ay ka qayb iyo badh nolosheena noqday, waxay noqotay mid caadi ah ilaa xad si aad u hesho dad badan oo naga mid ah ilaalinta macluumaadka xasaasiga ah ee telefoonada naga. Waa mar dambe ma buunbuunin haddii la yiraahdo in telefoonada naga u noqday badan ama ka yar asaxaabta gaarka ah. Dhab ahaantii, telefoonada yihiin si tartiib ah u la wareegay doorka ah in lagu ciyaaray by kumbiyuutarada sanado badan. Maqaalkani waxa uu ku siinayaa ah in si qoto dheer aragtida muhiimadda ay leedahay la dubayo ilaa xogta lagu kaydiyaa telefoonka halka sidoo kale aad u Inay aragti ah oo ku saabsan qalab aad u isticmaali karto in ay dib u kor Xogta xasaasiga ah sida.
Xatooyada ma aha erayo cusub in badan oo naga mid ah oo aynu wada ognahay cawaaqib in sara ka xigeenka this. Hadda qiyaasi haddii aad lahaa qaar ka mid ah macluumaadka aad muhiim u dhigay in aad telefoonka ka dibna uu kaa lumo telefoonka! Taasi dhab ahaan waxay noqon kartaa mid aad u niyad xumaado oo mid qiyaasi kartaa cadadka dhaqaalaha aad u lahayd in ay la kulmeyso si ay u nadiifiso kijinka oo kaliya.
Ka gaabinta 2.Hardware
Tani waxa ay heshay in nooca ugu badan ee telefoonka failure ka mid ah dadka isticmaala telefoonka ee adduunka maanta. Dabcan, qalab kasta ayaa wareeg nolosha oo 'la joojiyo karo iyada oo aan calaamad ah. Haddii aad tahay user phone xiiseeya oo uu leeyahay waraaqaha iyo xiriirada muhiim kaydiyaa telefoonka, markaa waa in aad ka feejignow furaysaan xogta aad ku dhex foomkan ee failure.
3.Malicious ka dhacay
Ayaa imaatay adduunka computer ma aysan la'aan faafidda weeraro xaasidnimo ah in si tartiib ah kor u kacay in ka badan muddo waqti ah. Weeraro Xaasidnimo inta badan qaataan nooc ah weeraro software iyo telefoonada ma way ka ammaan galeen weeraro sida. Qaar ka mid ah weeraro curyaamin karaan functionalities OS aad ka tago iyadoo la doortay ma jiro si loo soo dajiyo OS-oo macnaheedu cusub oo aad aakhirka qaar ka mid ah walax aad u muhiim ah ka aad telefoon laga badiyay doonaa.
4.Lose of Data By qalad
Aadanuhu ma qumman oo waa caadi na si ay u sameeyaan qaladaad-qaladaad sida la tirtiro file ah, xiriirada iwm oo aan ku talo dhici kartaa wakhti kasta. Dhibaatada waxa ay tahay xogta waa sida lacagta iyo qaladaad sida laga yaabo inuu aad la hilmaami Karin. Sidaas, arrintani waa wax waa in aad la raadinaya in ay ka fogaadaan iyada oo baaritaan phone dib.
Times soo kabashada 5.Quick
Beauty la taageero ilaa xogta aad waa xaqiiqda ah in waqtiyada soo kabashada ay dhacdo failure kasta oo sida caadiga ah waa mid aad u fudud si ay ula qabsadaan. Taas lidkeeda, dhaqdhaqaaqa ee uu ka soo kabsaday khasaaro xogta aan kor dib ma jirtaa cid wax macluumaad muhiim ah in isaga ama iyada phone doonayo inuu ku soo dhex noqdo.
Hadda oo aad ku faraxsantahay muhiimadda ay leedahay telefoonka dib, waa waqtigii aan eegno hab aad u hufan sameeyo telefoonka ah dib-up. Waxaan rabnaa in la isticmaalo qalab loo yaqaan Mobiletrans Wondershare. Qalab waa mid aad u boosaska badan ee dareenka ah in u kuu ogolaanaysaa inaad ka dib ilaa xogta asal ahaan telefoon kasta oo ay noqon iyo android, macruufka, phone Sysmbian. Waxaa intaa dheer, qalab kuu ogolaanaysaa inaad ka hayaan hore, hayaan iCloud, hayaan blackberry, Samsung Kies hayaan telefoon soo celin xogta.
Download iyo rakib Wondershare Mobiletrans
Xogta kaabta si aad u computer
Si aad dib ilaa xogta si aad u computer, xirmaan telefoonka kadibna aan biloowno Mobiletrans Wondershare . On interface software weyn, guji kaabta . Hubi ku saabsan dhammaan xogta aad rabtid inaad dib u kor ka dibna dooro Start Copy . Sida fudud sida in xogta aad waxaa loo wareejin doonaa your computer.
Wareejinta xogta u dhexeeya qalabka kala duwan
Si aad dib ilaa xogta telefoonka aad telefoon hore waxaad u baahan tahay in lagu xiro labada telefoonada si aad u computer isticmaalaya fiilooyinka USB. Burcad Mobiletrans Wondershare oo guji Start . Raadi taleefanka si uu suuqa kala iibsiga telefoonka iyo haddii oo dhan xidhiidhka ka raraa dekedaha USB waa okay markaas waxaad heli doontaa suuqa kala socda. Xogta in lagu wareejiyo muuqan doona dhexeeya labada telefoonada ee interface user. Just hubiyaan kuwa aad rabto in aad dib u haddaba guji Start Copy . Sug sida faylasha aad nuqullo loo diray telefoon kale.
Soo celinta gurmad ah
Waxaa muhiim ah in si kooban u leeyihiin ogaado sida ee sida loo soo celin xogta aad ku badbaadi dib ugu telefoonka ee mustaqbalka. Wondeshare Mobiletrans taageertaa in la soo celiyo ka hayaan sameeyo Lugood, iCloud, BlackBerry iyo MobileGo, iwm
Si aad u soo celin xogta aad ku xidhi telefoonka aad rabto in uu kaydiyo xogta isticmaalka dekedaha USB ah, Dooro Soo Celinta in menu guriga ka dibna dooro file qaab aad ku badbaadi aad format ee. Tallaabada xigta waa in la helo meesha aad dib u badbaadiyey ilaa ka dibna riix on nuqul ka bilaabatay doorasho.
Iyadoo tallaabooyinkan fudud aad u yarayn karaa halista ah ee wadada u xoqdo mar kale ka socda. Waxaa had iyo jeer ka fiican si looga hortago in ka badan in lagu daaweeyo waa!
> Resource > Top List > Top 5 sababood oo aad u baahan tahay gurmad phone